မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ | MyJobs
Result page 1 for မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ
အလုပ်6ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော2ရက် က
The IT Support will be responsible for supporting, maintaining and coordinating with the regional IT team for all of the Information and Communications Technology related matter of the company.
Front Desk Supervisor (Male/Female) (For Royal Dawei Hotel)
Royal Dawei Hotel is now currently looking for the role of Front Desk Supervisor
Assistant Chef (Male/Female) (For Royal Dawei Hotel)
We are looking for Assistant Chef for Royal Dawei Hotel.
Implement management guideline by preparing, updating and recommending human resources policy and practice
Housekeeping Officer(1) Post
လွန်ခဲ့သော 1 ပတ် က
Housekeeping Officer is responsible for cleaning and reporting to the in charge, also lead the housekeeping team
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: ဖောက်သည် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ
Receptionist functions asareceptionist, information source, clerk, and typist for the staff of the hall to which they are assigned. The Receptionist should possess good public relations and clerical skills.
စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များ 1 ဖောက်သည် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 1 လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 1 ဟိုတယ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု အလုပ်အကိုင်များ 3
ရန်ကုန်4မြန်မာပြည်အတွင်း 2